ငါတို့သည်သိရမည်အကြောင်းကျေနပ်မှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်သင့်မိုဘိုင်းဆယ်လူလာဖုန်းကို။ သင်ငြိမ်ဝပ်ခစျြ၏တင်ဆောင်လာသောကိရိယာဖြင့်သဟဇာတဂိမ်းအတွက်အသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်သို့မဟုတ်ကသင့္လက္ထဲမွာပါ။ ဒါကြောင့်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူများအတွက်ခရီးသွားလာအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ပြည်ပမှာအမြဲကြောင်းလွယ်ကူသောလက်လှမ်း။ သို့သော်၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သိရုံမေတ္တာရှိခြင်းကောင်းတစ်ဦးအဟောင်းအပေါ်အချိန်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုစောင့်ကြည့်။ သင်ချစ်သောသူကိုမြင်လျှင်အမြင့်၊အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေး၊နှင့် storylines နှင့်အတူကြီးမြတ်အသေးစိတ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအားလုံးကိုလိင်ကနှိုးဆွနှင့်ဆန်းကြယ်သော၊သင်သာနှင့်တွေ့ရှိမီသင်၏မျက်စိ။, သင်သည်မေတ္တာရှိသောအခါဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်မှုများရှိသည်ဒုက္ခရွေးချယ်ခြင်းပဲ၊ဒါပေမယ့်တိုင်းတစ်ခုတည်းသောကိုနှိပ်ပါကအဖြစ်ပြီးပြည့်စုံသောအဖြစ်အခြား။ အဆိုပါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခါသင်ပြန်လည်နှစ်၊သုံး၊လေးသင်အဘယ်အရာကိုမြင်ကျေနပ်လိင်လမ်းကြောင်းအခြားသူများကိုသင်ယူ။ သင်ချစ်သင့်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်သင့်။ အဘယ်မှာရှိကြောင်းဖွင့်အမှန်တကယ်လိုချင်၏တန်ခိုးဂိမ်းကစားအမှန်တကယ်ထွက်ကြွလာ၊ဒါကြောင့်စေခြင်းငှါ၊အလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်။ မှကြွလာသောအခါအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများ၊ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းအမှန်တကယ်အောင်ကြီးမားတဲ့ပက်နှင့်ပေးပို့ခြင်း၏လှိုင်းတံပိုးကိုအပျော်အပါးကိုဖြတ်ပြီးဂိမ်းကစားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ပ။, ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? ဒါဟာရဲ့အချိန်သင်တို့အဘို့အကြည့်ဖို့ညမ်းဖြည့်ဆည်းဂိမ်းကစားနှင့်အဆုံးစွန်သောမိုင်နှင့်လာမည့်အဆင့်အထိ၏အာရုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါအသစ်နှင့်လာမည့်ဆိုက်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိသည်အသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပြီးနေ့တိုင်းကြီးထွားလာကြသည်။ နှင့်အစဉ်မည်အကြောင်းအများကြီးတူပုံရ၊အဖန်ဆင်းခဲ့သည်အားလုံးကိုင်တွယ်ရန်ဤအသုံးပြုပုံ၊အနှေးကွေးပွင့်။ တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဂိမ်းကစားဆိုဒ်များသင်ဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့စက်ကိရိယာသင်ရွေးချယ်ဖို့အပေါ်ပူးပေါင်း။ အဖြစ်ဘယ်တော့မှကျရောက်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေး။ သူတို့ရိုသေလေးစားမှုကိုသူတို့အသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်မတရားသောအရာကိုသို့။ မရှိပျင်းစရာကြော်ငြာများကိုပဲသတ်လုံးအစိတ်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ပျော်စရာရှိခြင်းကြသည်။, ဂိမ္းဘယ်တော့မှအေး၊ဘယ်တော့မှနောက်ကျပြီးဆုံးဖြတ်ချက်သည်အပြီးစာသားအတိုင်းပြည့်စုံ။ နှုတ်မှာခပ်ဝါးဝါးအစာသို့မဟုတ်နေသောသူတို့အား pixilated၊အဂၤမြင့်မားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အံ့သြဖွယ်အာရုံစိုက်ပေးဆောင်ဆီသို့ဦးတည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်အမှုအရာပွင့်ပါစေသောအကြောင်းအပျော်အပါးခံစားဒါကြောင့်အိမ်၊နှင့်ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းများသင်ပေးသည်သောအဒါအများကြီးပို။ အရှာကြသည်လျှင်သင်အဘို့အပြည့်စုံသောဂိမ်းနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောအရေအတွက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူကွဲပြားမှု။ ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းများလိမ့်မည်အသစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ! ဒီပလက်ဖောင်းလည်းလုံးဝအခမဲ့သင်ပေးခြင်းအားတန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်ရွေးချယ်စရာများစမဲ့ဘဏ်ကိုချိုးဖောက်မပါဘဲ။, များသောအခြားသူများနိုင်ဆိုကြသည်ကိုအကြောင်းပြု! သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်၊နောက်ကျောသွားကြဖို့အားလုံးကိုသူတို့အားပျင်းစရာအခြားဆိုဒ်များမပေးပါဘူးသင်သည်အဘယ်သို့အလိုရှိသောနှင့် fantasize ညဉ့်လုံး! သူတို့ကမပေးစားနိုငျအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းများတရားမျှတမှုအတူကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းများပါဘူး။ နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို၊သူတို့ဘယ်တော့မှတောင်းသင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်တစ်ခုခုကို! ဂိမ်းနှင့်အတူလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအခုအချိန်မှာအပေါ်အသုံးပွုဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဆိုက်:ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်း!
ဘယ်လိုလည်ပတ်မှုစနစ်သုံး၊ဘာဘာသာစကားကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်သို့မဟုတ်ပိုနှစ်သက်။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးသင့်အချိန်ဇုန်ဖြစ်စေ! သင်ပင်အမှန်တကယ်သုံးစွဲ OC ညမ်းဂိမ်းအပေါ်အားလုံးသင့်ရဲ့ဖုန်း:သင်၏မိုဘိုင်းဆယ်လူလာဖုန်း၊တက်ဘလက်အပင်! ဒါပေမယ့်အမှန်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံ၊တစ်ဦးအပြည့်အဝမျက်နှာပြင်လိင်ထုပ်ပိုးဂိမ်းရုံလှိမ့်သင်တို့မျက်မှောက်၌၊ရှိသမျှဂိမ်းကစားကိုအသိအမှာအကောင်းဆုံးနှင့်ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းများသစြပ္က်ယ္များအတွက်အကောင်းဆုံး! စကားကိုဒါဟာအရေးမပါဘူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသင်ဘာကိုကျားသင်တွဲဖက်။ ဘယ်သူအရေးမပါဘူး။ အားလုံးသေားနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကြိုဆိုနေကြသည်။, သာအမှုအရာလိုအပ်နေသောအနေနဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်၊စက်ကိရိယာ၊နှင့်အဂပျော်အပါးအဘို့။ ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းများလိမ့်မည်ကျေနပ်အောင်အသီးအသီးများနှင့်အသီးအသီး၏ရမ္မက်တဏှာနှင့်ပေးလှည့်လည်ပြီးနောက်အဝိုင္း၏အစွမ်းထက် climaxes သင်ဖူးခဲ့။ အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုသင်မည်သို့ပြပါတကညမ်းစေသင့်ပါသည်ကစား။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးဆိုရင်ဆာင္တတ္ၾကစားသို့မဟုတ်သာမန်၊ဒါကြောင့်အရေးမပါဘူးအသစ်ဆိုရင်သင်တစ်ဦးအပြာလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အဝါ။ သူတို့အတွက်အရာတစ်ခုခုရှိသည်၊လူတိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဆိုက်လုပ်ခံရဖို့လွယ်ကူတဲ့အတွက်လူတိုင်းလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်၏။, ရှိမရှိသင်အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်လိင်ဂိမ်းများနှင့်အက္ခရာများရှိသည့်အတွက်အားလုံးသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးကြောကြပ်လိင်မေတ္တာရှင် slut လိင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကမ္ဘာကြီး၊ဒါဟာအားလုံးလွယ်ကူများအတွက်။ သင်သည်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ၊သင်မိဖုရားအားဖြင့်ရပ်တန့်နှင့်ထုတ်စစ်ဆေး။ အသစ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများ၊နေ့တိုင်းဝင်ရောက်သင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် aquatinted အတူကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းအသိုင်းအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အိမ်မှာခံစားရပါတယ္။ နယူးဂိမ်းများသြားနေ့တိုင်းနှင့်ပြီးသားရှိပါတယ်အပေါ်ရာပေါင်းများစွာဤအပလက်ဖောင်း၊အတူစတင်ရန်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ကစားရန်သူတို့ကိုအားလုံး၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဝံ့ဖို့သင်ကြိုးစား!, အနည်းငယ်ပျော်စရာနာကျင်ဘယ်တော့မှမည်သူမဆို။ အောင်အမည္စာသားအတိုင်းယူစက္ကန့်ပြီးနောက်၊မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုကန့်သတ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အတူအဘယျသို့ပွုနိုငျ၊အတှေ့အကွုံ၊နှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်ညမ်းဂိမ်း!
ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်အကြောင်းဂိမ်းများများမှာ။ သူတို့အားလုံးမှာအဖျားနှင့်အသုံးပြုဖို့များအတွက်သို့သော်သင်ပေးပါ။ ဂိမ်းများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအမြင်နှင့်ဆန်။ ခံစားညည်းအထွတ်အတွက်အစက္ကန့်နှင့်အသံဒါကြောင့်ပြင်းထန်သော! နောက်တဖန်အ၊အသေးစိတ်အရေးရှုထောင့်အကြောင်းများကိုစိတ်မှုတ်အတွေ့အကြုံ၊နဲ့ကွန်ပျူတာညမ်းဂိမ်းမကိုင်ပါဘူး။ ပျော်စရာရှိသည်ဖြစ်စေ၊အသုံးပြုကာကြယ္မွဳအျသို့မဟုတ်ရွင္မ်ား။ တဲ့၊တြကိုသာေ၊သို့မဟုတ်အသံုးျပဳသူမ်ား။ သုံးလုံးသင့်ရဲ့အလုပ္လုပ္ပါပြီးပြီကောင်းတစ်ဦးအဟောင်းအပေါ်အချိန်ကွန်ပျူတာညမ်း။, ရပ်တန့်ခြင်းအားဖြင့်နေ့နှင့်အသင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခံစား၊နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အားလုံးအခြားသူများကင်းမဲ့!